महिलाले पुरुषमाथि जबरजस्ती गर्नु बलात्कार हो? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति १६ श्रावण २०७६, बिहीबार १३:०० लेखक नेपाली जनता
केट सिल्वर, बीबीसी न्यूज। जब एक पुरुष कुनै महिलासँग बिना इच्छा जबरजस्ती यौन सम्बन्ध बनाउँछ भने त्यो बलात्कार हुन्छ, तर यदि एक महिलाले पुरुषलाई बिना उसको इच्छा यस्तो गर्न बाध्य बनाउँछे भने के बलात्कार होइन?
इंग्ल्याण्ड र वेल्सको कानुनमा यो बलात्कार होइन, तर यो घटनामा अध्ययान गर्ने एक लेखकले भने यसलाई बलात्कार मान्नु पर्ने बताएका छन्।
ल्यांकास्टर यूनिभर्सिटी ल स्कुलकी डाक्टर सियाभान वियरेले बेलायतमा २०१६–१७ को अवधिमा जबरजस्तै यौन सम्बन्धमा पहिलो शोध गरियो । यसमा उनले २०० भन्दा धेरै पुरुषहरुबाट अनलाइन सर्वे गरेर सूचनाहरु संकलन गरिन् ।
उनले मे २०१८ र जुलाई २०१९का बीच ३० पुरुषसँग अन्तर्वार्ता गरिन् । यो शोध हालै प्रकाशित भएको छ । यसमा त्यो अवस्थाहरुबारे विस्तारमा चर्चा गरिएको छm जहाँ जबरजस्ती यौन सम्बन्ध हुन्छ र यसको परिणाम के हुन्छ तथा कानुनी कारबाही कसरी हुन्छ ।
यसरी अन्तर्वार्ता दिएका पुरुषहरुको जानकारी गोप्य राखिएको छ । तर ती मध्ये एकलाई जोनको नामले बोलाउनेछौं । जोन भन्छन्, ‘केही गलत भइरहेको छ भन्ने महसुस त्यतिबेला भयो जब पार्टनरले आफैलाई नोक्सान गर्न शुरु गरिन् ।’ एक डरलाग्दो घटनापति उनले आफ्नी पार्टनरलाई उपचारका लागि अस्पताल लगे । त्यहाँ दम्पतीले यस्तो हुनुको मनोवैज्ञानिक कारणबारे घण्टौं कुरा गरे । लगभग ६ महिनापछि उनले आफुलाई नोक्शान गर्नुको सट्टा जोनलाई निशाना बनाउन शुरु गरिन् ।
जोन भन्छन्, ‘म लिभिंग रुपमा बसेको थिएँ, उनी किचनबाट आईन, मेरो नाकमा निकै बलले हानिन् र अट्टाहास हाँसिन् र त्यहाँबाट गइन् । त्यसपछि दैनिक झगडा हुन शुरु भयो ।’
पछि जोनले चिकित्सकको सहयोग लिने प्रयास गरे । जोनकी पार्टनरको काउन्सलिंग पनि भएको थियो र मनोवैज्ञानिक विधीबाट उपचारको सल्लाह दिइयो ।
आफु कार्यालयबाट घर आएपछि पाटर्नरले सेक्सको माग गर्ने गरेको जोन बताउँछन् । उनले भने ‘उनी हिंस्रक हुन थालिन्, अवस्था यस्तो पनि आएको घर आउने कुराले मलाई डर लाग्न थाल्यो ।’
एक दिन जोनको आँखा खुल्दा उनको दाहिने हात बेडको फ्रेममा हतकडीले बाँधिएको थियो । यस्तो उनकी पार्टनरले गरेकी थिइन् ।
त्यसपछि बेडमा राखिएको स्टीरियो सिस्टमबाट लाउड स्पीकरले उनको टाउकोमा हान्न शुरु गरिन् । अनि अर्को हात नाइनलको डोरीले बाँधिन र सेक्सका लागि दबाब दिन थालिन् ।
पीडा र डरका कारण जोन उनको माग पूरा गर्न असमर्थ थिए । यसका कारण उनकी पार्टनरले फेरि जोनलाई पिट्न थालिन् । एक घण्टासम्म बाँधेर राखिन् । यो घटनापछि उनकी पार्टनर यो विषयमा कुरासम्म गर्न तयार भइनन्।
केही समयपछि उनी गर्भवती भइन् र यसप्रकारका झगडामा पूर्णविराम लाग्यो । तर, बच्चा जन्मेको केही दिनपछि फेरि एक रात जोनको आँखा खुल्दा उनले आफ्नो हात बेडमा हतकडीले बाँधिएको अवस्थामा आफुलाई पाए । जोनका अनुसार त्यसपछि उनकी पार्टनरले जबरजस्ती भियाग्रा खुवाइन् र उनको मुख बन्द गरिदिइन् ।
उनी भन्छन्, ‘म केही गर्न सक्दैन थिएँ, यसपछि म नुहाउन बाथरुपमा गएँ । मलाई थाहा छैन शावरमा कति समय बसेँ । अन्त्यमा सिँढीबाट तल आउँदा जो उनले पहिलो कुरा मलाई भनेकी थिइन् त्यो थियो – रातीको खानामा के छ ।’
जब जोनले यो विषयमा मानिसहरुलाई भन्ने प्रयास गरे उनको कुरा कसैले पनि पत्यानन् । उनी भन्छन्, ‘मलाई भनिएको मैलेक किन घर छोडेन, यो घर मेरो थियो जो मैले बच्चाहरुका लागि किनेको थिएँ र पैसा पनि मेरै थियो । त्यसैले म आर्थिक सम्बन्धमा बाँधिएको थिएँ । मानिसहरु ममाथि अझै पनि विश्वास गर्दैनन् किनकी उनीहरु भन्छन्, मैले उल्टै उनलाई किन पिटेन? के गर्नु मैले यो सबैबाट छिटै मुक्ति पाएको भए ।’
डाक्टर भिवरेले केही अरु पुरुषहरुसँग पनि अन्तर्वार्ता गरेकी थिइन् । उनीहरुको अनुभव पनि जोन जस्तै छ । उनको अध्ययनको निश्कर्ष यो पनि छ की यस्तो अपराध धेरैजसो महिला पार्टनर वा एक्स पार्टनरसँग हुन्छ । र प्रयाः घरेलु हिंसामा यस्तो हुन्छ ।
एक अन्य पुरुषले भने, ‘हामी यषे विषयमा कुरा गर्न डराउँछौं र लाज मान्छौं । जब हामी यो विषयामा कुरा गर्छौ हामीलाई विश्वास हुँदैन किनकी हामी पुरुष हौं ।’
यी अनुभवहरुको रिपोर्ट गर्न प्रायः पुरुषलाई लाज लाग्छ । उनीहरु यौन शोषणको उल्लेख नगरिकनै घरेलु हिंसाको रिपोर्ट गर्न सक्छन् ।
दिमागमा पनि गम्भीर असर पर्न सक्छ । आत्महत्याको विचार आउन सक्छ र यौन क्षमतामा ह्रास आउन सक्छ ।
केही पुरुषहरुले पटक पटक पीडित भएको कुरा भनेका छन् । केही बालापनमा यौन शोषणबाट पीडित थिए । केही अलग अलग तरिकाले यौन हिंसाका पीडित थिए ।
पुरुषहरुमा पुलिस, न्यायिक प्रणाली र कानुनलाई लिएर केही नकरात्मक धाराणहरु थिए ।
भियरेको शोधमा एक मिथक पनि खुलासा भयोकी पुरुषहरुमाथि जबरजस्ती सेक्स असम्भव छ किनकी महिलाका तुलानामा पुरुषहरु शारीरिक रुपमा अधिक बलिया हुन्छन् । अर्को कुरा पुरुषहरु महिलाहरुसँगका सबै यौन अवसरहरुलाई सकरात्मक मान्छन् ।
तेस्रो मिथक यो पनि छ की यदि पुरुषहरु उत्तेजनामा आए भने उनीहरु अवश्य पनि सेक्स चाहन्छन् । भियरेका अनुसार ‘वास्तावमा उत्तेजना विशुद्ध एक शारीरिक प्रतिक्रिया हो ।’
उनी भन्छिन्, ‘यदि पुरुषहरु डराएका छन्, क्रोधित, भयभीत आदि भए पनि उनीहरु उत्तेजित हुनसक्छन र भइरहन सक्छन् । यस्ता शोध पनि देखाइन्छकी महिलाहरुमाथि बलात्कार हुँदा पनि उनीहरु सेक्सुअली एक्टिभ हुन सक्छिन् निकी उनीहरुको शरीरले शारीरिक प्रतिक्रिया दिन्छ । यो पुरुष र महिला दुबै पीडितहरुका लागि एकै मुद्दा हो जसमा पर्याप्त बहस भएको छनै यस विषयमा स्पस्ट प्रमाण छन् ।’
सिके राउत राष्ट्रिय सभा सांसद !
काठमाडौं । सरकारसँग राजनीतिक सहमति गरेका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके (चन्द्रकान्त) राउतलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने सहमति भएको छ।…
नेता हेमन्तप्रकाश ओली कारागार चलान
काठमाडौं । नेत्रवित्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का पोलिटब्यूरो सदस्य तथा मध्य क्षेत्रीय कमान्ड हेमन्त प्रकाश…
प्रधानमन्त्री ओली तीन दिने भ्रमणाका लागि अाज भारत जाँदै
काठमाडाैँ । निर्वाचनपछिको पहिलो सरकार प्रमुखका रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ५४ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अाज छिमेकी भारतको…
मलेसिया जाने कामदारमाथिको सिन्डिकेट ब्युँताउन दूतावास नै सक्रिय
काठमाडाैं । वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदारमाथि वर्षैदेखि भइरहेको ठगीमा संलग्न सिन्डिकेट ब्युँतायने गतिविधमा नेपालस्थित मलेसियन दूतावास नै सक्रिय…
बेइजिङ उड्यो हिमालय एयरलाइन्सको जहाज
काठमाडौं । चीनको राजधानी बेइजिङमा पहिलो पटक नेपाली वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले उडान थालेको छ । आइतबार बिहान ९…
मेषः– तनावमा कमि आउनेछ । दुविधामा नपरि योजना बनाएर काम गर्नु होला थोरै भए पनि सफलता हात लाग्नेछ ।…